Af-duubihii saraakiil Faransiis ah oo shalay lagu qabtay Camaara | KEYDMEDIA ONLINE
CAMAARA, Soomaaliya - Jibriil Saciid Cali Xuseen oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab 10 sano ka badan, ayaa shalay lagu qabtay degaanka Camaara ee Koofurta Gobolka Mudug, isagoo xiran dhar dumar (Xijaaab iyo cabaayad).
Jibriil Saciid, wuxuu ahaa af-duubihii saraakiishii Faransiiska ee Denis Allex iyo Marc Aubrière, kuwaas oo caasimadda Soomaaaliya lagu qafaashay 14kii Luulyo 2009-kii, iyaga oo ku sugan Hotel Saxafi, kadib markii dalka loogu soo diray in ay dhanka tababarka ka caawiyaan ciidanka Dawladdii Ku-meelgaarka ahayd.
Ciidamada uu hoggaaminayo Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Cumar Xasan (Joon) ayaa gabal-dhicii shalay gacanta ku dhigay Jibriil iyo dagaalamayaal kale oo ka tirsan Al-Shabaab, kadib markii ciidamadu la wreegeen degaanka Camaara oo ay in muddo ah kaabiga ku hayeen.
Maxay ahaayeen Saraakiishii uu afduubtay 10 sano ka hor?
Agaasinka Guud ee Amniga Dibadda Faransiiska, ayaa Denis Allex iyo Marc Aubrière, u soo diray Soomaaliya sanadkii 2009-kii, si ay u tababaraan askarta Dowladdii Ku-meelgaarka ahayd, hayeehsee, 14kii Luulyo 2009kii, labada ninba waxaa laga qafaashay hoteelkii ay ku sugnaayeen ee Saxafi, waxaana af-duubka fuliyay rag uu hoggaaminyay Jibriil Saciid Cali Xuseen, oo markii hore iska dhigay Booliska Soomaaliya.
Denis Allex iyo Marc Aubrière, waxa ay gacanta u galeen Urur-kii Xisbul Islaam ee xilligaas ka jiray Soomaaliya, hayeeshee, 25-kii Ogoosto 2009-kii, Marc Aubrière, oo lagu hayey Muqdisho, ayaa qaab aan la shaacin uga baxay gacantii af-duubayaasha, waxaana isla maalmahaas dib loogu celiyey Faransiiska.
Abbaaro 2:00 AM, waqtiga maxalliga ah, 11-kii Janaayo 2013-kii, 50 askari oo ka tirsan Ciiddanka Gaarka ah ee Faransiiska oo ka socday DGSE qeybta ficilka tooska ah ee aadka u qarsoon ee loo yaqaan (Qeybta Waxqabadka) oo ay taageerayaan helikobtarrada Caracal ee EC-725 oo laga soo diray Mistral, (Koofurta Faransiiska), ayaa weerar ku qaaday saldhig ay Al-Shabaab ku lahayeen Buulo Mareer, halkaas oo la rumeysan yahay in Denis Allex lagu hayay.
Intii lagu guda jiray is-rasaaseyn xooggan oo socotay 45 daqiiqo,17 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab iyo kabtan Faransiis ah ayaa la dilay, ugu danbaynna, Ciidamada Gaarka ah ee Faransiiska ayaa hakiyay hawlgalka kuna laabtay diyaaradahoodii.
Habeenkaas, xubno ka tirsan al-Shabaab ayaa dilay Denis Allex, intii lagu jiray howlgalka, iyaga oo ka cabsanaya inuu ka baxo gacantooda.
13 -kii Janaayo 2013, Dowladda Federaalka Soomaaliya, ee uu hoggaaminayay MW Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa cambaareysay howlgalka Buulo Mareer, maadaama aan laga wargalin, isla-markaana ay ku geeriyoodeen dad badan oo shacab ah oo ay ku jiraan carruur iyo hooyooyinn uur leh.
14-kii Janaayo 2013, Al-Shabaab ayaa barteeda Twitter-ka ku soo bandhigtay sawirka meydka nin caddaan ah oo ku lebisan dareeska ciidanka Faransiiska, waxayna ku tilmaameen inuu yahay “hoggaamiyihii” weerarkii kumaandooska Faransiiska, Saddex maalmood ka dib, Al-Shabaab ayaa sidoo kale ku shaacisay Twitter-ka, in Allex la dilay iyadoo laga jawaabayay hawlgalkii Faransiiska.
Waxaa la rumeysan yahay in Jibriil Saciid Cali Xuseen, ay gacantiisa ku maqan yihiin dad kale oo ajaaniib ah, kuwaas oo badankood la khaarijiyay kadib markii la isku fahmi waayay lacagihii ay Al-Shabaab u codsadeen madaxfurashada.
Xogaha la xariira Jibriil Saciid Cali Xuseen, oo hadda ku jira gacanta Galmudug, kala soco Keydmedia.net.